December 3, 2020 - Khitalin Media
December 3, 2020 by Khitalin Media
ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားတဲ့ ယုံမှားသံသယတွေရှိကြပါတ ယ်။ဒီလိုေ တွဖြစ်ရတာဟာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆေ ဟာင်းတွေေ ကြာင့် ဖြစ်ရတာပါ။သိပ္ပံပညာနဲ့ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရှုေ ထာင့်အမြင်တွေ မရှိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ေ ယာက် လစဉ်ရာသီသွေး ဆင်းတာဟာ ဘာကြောင့်လဲလို့ အဖြေထုတ် ဖို့ ခက်ခဲကြတာပါ။ဒါကြောင့် လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါကို ဘာ သာရေးရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ပြီး Negative အမြင်နဲ့ ကောက်ချက် ချခဲ့ကြတာပါ။ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မသန့်စင်ဖူး၊ မစင်ကျ ယ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပိုင်း မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဆိုရ င်လည်း ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားတဲ့ အယူအဆ အတွေး အခေါ်တွေ ရှိနေစဲပါ။တစ်ချို့ဟာဆိုရင် ကြာလာတော့ အယူအဆမှား လို့ တောင်လူတွေက သိပ်မသိကြတော့ပဲ အမှန်လို့တောင် ထင်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေစိတ်ထဲမှာ … Read more
တင်းတိတ် ၊ မှဲ့ခြောက် ၊အမည်းစက်တွေသာဆို ဒီနည်းရှိတယ်နော်
တင်းတိတ် ၊ မှဲ့ခြောက် ၊အမည်းစက်တွေသာဆို ဒီနည်းရှိတယ်နော် ကဲ တင်းတိပ်နဲ့အမဲစက် မှဲ့ခြောက်ရှိတဲ့ သဲလေးတို့ရေ….အာလူးလေးသွေးလိမ်းကြမယ်နော် ။သဘာဝနည်းမို့လို့ အထင်သေးချင်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီးကြီးskin care တွေမဝယ်သုံးနိုင်တဲ့ မမတွေညီမလေးတွေအတွက် လွယ်ကူပြီးထိရောက်မြန်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ။ အာလူးနဲ့ပွတ်တာတစ်ပတ်လောက်နဲ့ ပါးသွားပါတယ်။စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့သာအဓိကပါ အရှင်းမပျောက်ဘူးဆိုရင်တောင် အရင်လိုကြည့်ရမဆိုးတော့ပါဘူး ။ တင်းတိပ်အမဲစက်မရှိတဲ့သူတွေလိမ်းရင်တော့အသားအရေတင်းရင်းစိုပြေပြီး ဖြူ လာပါလိမ့်မယ် ကိုယ်တွေ့မိူ့ပြောပြတာပါ အာလူးက ဂျေးချွတ်နိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ် ။ အားလုံးစမ်းသပ်လို့ရအောင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင့် ။ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေတော့သတိပြုပေးပါနော်..အာလူးတစ်လုံးကိုရေပြောင်အောင်ဆေးပါ ။ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေပြောင်အောင်ဆေးပါ ။ကျောက်ပျဉ်သန့်သန့်တစ်လုံးမှာ အရည်ရလာတဲ့အထိသွေးပါ ။ ရလာတဲ့အရည်ကိုယူပြီးမလိမ်းပါနဲ့ အာလူးမှာကပ်ပါလာတဲ့ အရည်ကိုသာအမဲစက်ရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာစက်ဝိုင်းပုံစံပွတ် ပေးပါ။ နာရီဝက်လောက်မျက်နှာအနှံ့လိုက်ပွတ်ပါ ခြောက်အောင်ထားပြီး ကြက်သီးနွေးရေနွေးနဲ့ဆေးချပါ ။သတိထားရမှာကတော့ ရေအေးနဲ့ဆေးလို့မရပါဘူးနော် ။ ရေအေးနဲ့ဆေးရင်ပိုပြီးမဲသွားတတ်ပါတယ် ရေနွေးနဲ့ဆေးမှ သိသာတဲ့resultကို ရမှာပါ အဲ့တစ်ချက်ကိုသတိထားပါ။ … Read more
အမျိုးသမီး ( ၅ )ဦးလျှင် ( ၄ )ဦးက လက်မထက်ခင် အတွေ့အကြုံရှိ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မပြုမှီမှာပင် အမျိုးသမီး (၅)ဦးလျှင် (၃)ဦးကသူတို့ ၏ အပျိုစင်ဘ၀ကို ဘ၀ကြင်ဖော်မဟုတ်သည့် အခြားတစ်ယောက်နှင့် မျှဝေခဲ့ကြောင်းနှင့် (၅)ဦးလျှင် (၄)ဦးကမူ ကြင်ဖော် သို့ မဟုတ် အခြားတစ်ယောက်နှင့် မျှ ဝေခဲ့ကြောင်း …. FNG ၏လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့ များတွင် ပြုလုပ်သည့် FNG ၏ ” လက်မထပ်မှီ အပျိုစင်ဘ၀ ထိမ်းသိမ်းနိုင်မှု ” စစ်တမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ မှ ၂၄ ဦး ၊ မန္တလေး မြို့မှ ၁၅ ဦး နှင့် နေပြည်တော်မှ …. အမျိုးသမီး ရှစ်ဦးက သူတို့ ၏ အတွေ … Read more
ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင်အုံပိုထူစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
ဆံပင်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အထူးဂရုစိုက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံ ပင်ေ တွပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ (၁) ကြက်ဥ ၊ဒိန်ချဉ်တို့ဖြင့် ပေါင်းတင်ပါ ဥတွေမှာ ပရိုတိန်း၊ ဘိုင်အိုတင်းနှင့် ဗီတာမင် B11 တို့ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ပါးလွှာပြီး အဆြီ ပန် တဲ့ဆံပင်ကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ကြက်ဥကို ဂရိဒိန်ချဉ်နှင့် ရောပါ။ဆံပင်မှာလိမ်းပြီး တစ်နာရီေ လာက်ထားပါ။ ပြီးမှ ခေါင်းလျှာ်ပေးပါ (၂) gelatin အမှုန့်ကို essential oil နှင့်ရောပါgelatin အမှုန့်မှာ ပရိုတင်းဓါတ်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ခွက် တစ်ဝက်လျှင် ပရိုတင်း၂ဂရမ်နီးပါး ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ပါးလွှာပြီး ပျက်စီးနေသောဆံပင်ကို ထူပြီးခိုင်မာစေဖို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးဖြစ်ပါတယ် … Read more
ပျောက်ဆေးက မရှိသေး။ ကာကွယ်ဆေးက မကြာမီ။ ဆိုတော့ ဖြေဆေး လေးနဲ့ စောင့်ကြတာပေါ့ ။ အခုတော့ဖြေဆေးကိုတွေ့ခဲ့ပြီ။ (၁) နိုင်ငံတော် ဖြေဆေး – ရှိရှိသမျှသော အရင်းအမြစ်တို့ကို အစွမ်းကုန်သုံးပြီး ပိတ်ချီတစ်ခါ ၊ ဖွင့်ချည်တစ်လှည့် ။ ကျွေးမွေးမပျက် ဆောင်ရွက်စီမံ ပြီး ကြူနည်းပေါင်းစုံ ၊ စင်တာအမျိုးမျိုး နဲ့ ပြည်သူတိုင်းကို ရင်ဝယ်သားပမာ သဘောထား စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်က နိုင်ငံ့အရင်းအမြစ်တို့ကို အနာဂါတ်အလို့ငှာ ရှေ့ရေး မျှော်တွေးရမှာမို့ ။ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းတွေ နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ” စောင့်ရှောက်မှု ” အရာမှာ နောက်မကျန်ခဲ့ပေဘူးလို့ “ဖြေ” မယ်ဆိုရင် ” ဖြေသာ” တဲ့ အခြေအနေပါ။ တရားနဲ့သာ ဖြေပါရော့နိုင်ငံတော်။ (၂) … Read more
ငွေကြေးအခက်အခဲ အဆင်ပြေလိုလျှင် သောကြာနေ့ကျ ဒီနည်းလမ်းလေးကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ၊ အကျိုးထူးပါတယ်
ငွေကြေးအခက်အခဲ အဆင်ပြေလိုလျှင် သောကြာနေ့ကျ ဒါလေးလုပ်ပါ။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) သောကြာနေ့တိုင်း အဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလှူပါ။ ငွေကြေးအခက်အခဲ အဆင်မပြေမှု သောကများမှ လွတ်ကင်းချမ်းသာစေဖို့ ဆရာဦးမင်းနိုင် ကျွန်တော့်ကို သင်ကြားပြသခဲ့သည်ထဲမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ငွေလိုရင်ငွေရစေသည့်နည်းလမ်းလေးတစ်ရပ်ကို တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေနဲ့ သတိရလို့ အများသူငှါ အကျိုးရှိစေရန် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနပြုပါရစေခင်ဗျ။ အဖြူရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလှူရမည်ဆိုရာ၌ ဆန်တစ်ထုပ်တွင် ထန်းလျက်(သို့)ကြံသကာနှင့် မိမိတက်စွမ်းနိုင်မည့် ပိုက်ဆံတို့ကို တွဲဖက်၍ သောကြာနေ့တိုင်း၌ မရှိဆင်းရဲသားများကို ဒါနပြု လှုဒါန်းပေးရပါမည်။ (၁)ပထမအဆင့်၌ စားဝတ်နေရေးပြေလည်နေခြင်း။ (၂) ဒုတိယအဆင့်၌ ငွေကြေးလည်ပတ်မှူကောင်းမွန်နေခြင်း။ (၃) တတိယအဆင့်၌ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကို မုချရရှိမည်။ မရှိဆင်းရဲသားများကို နေ့လည်(၁၂)နာရီမှ ညနေနေဝင်ချိန်အတွင်း လုံးဝမလှူရပါ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး တကယ်လုပ် အဟုတ်ထိရောက်လွန်းလို့ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သောကြာနေ့ရက်တိုင်း သတိတရ … Read more